काँग्रेस आस्थावान यि सुन्दरी भन्छिन: हामीले बिपीलाई कहिलेसम्म बेच्‍ने ? — Imandarmedia.com
काँग्रेस आस्थावान यि सुन्दरी भन्छिन: हामीले बिपीलाई कहिलेसम्म बेच्‍ने ?
एलिजा ढकाल ।
यात्राका क्रममा मैले एउटा गाउँमा खरले छाएको सानो घरमा चारतारे झण्डा फहराएको देखेकी थिएँ। त्यो देख्नसागथ थकित शरीर भए पनि मन ढक्क फुल्यो। थकाई सबै बिर्सिएर गर्वले गदगद भएँ। मैले बिपी सम्झिएँ। बिपी नाम सम्झिए ‘ठूलाठूला’ महलमा बस्नेलाई म जनता मान्दिन ति त एक प्रतिशत पनि छैनन्। जो मोटरमा हिड्छ, राम्रो लगाउछ र मीठो खान्छ त्यो जनता होइन। जनता त गाउँमा बस्छन्। मलाई लाग्यो बिपीले भनेको नेपालीको घर यही हो। यो सानो घरमा पक्कै पनि वास्तविक नेपाली जनता बस्छन्। अझ बिपीवादी जनता बस्छन्।
जनयुद्धले जन्माएकी गायीका घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय म्युजिक अवार्डमा छनोट, जिताउन यसरी गर्नुहोस् भोट
निर्वस्त्र बाथरुममा नुहाउँदै गरेकी बाहुबलीकी नायिकाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि …